Last update01:57:25 AM
स्पर निर्माणमा तीस लाख घोटालाको आशंका
दक्षिण एसियाकै उकृष्ट महानगर बनाउँछुः ज्ञवाली
खैरहनीलाई समृद्ध नगर वनाउँछुः लालमणी चौधरी
रत्ननगरलाई नमुना नगरपालिका बनाउछुः वन
राजनीतिक चप्पल बहिरै खोलेर जनताको काम गर्छुः दुवाडी
Back You are here: Home समाचार
क्यान्सर अस्पताललाई सात दिनको अल्टिमेटम
भरतपुर, २६ चैत । क्यान्सर अस्पताल बचाऊ संघर्ष समितिले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेसँग भेट गरी अस्पतालमा भएका समस्या समाधानका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
संघर्ष समितिको टोलीले शुक्रबार अस्पतालका अध्यक्ष डा. न्यौपानेलाई भेट गरी समस्या समाधानका लागि चेतावनी दिएको हो । समितिले सात दिनभित्र अस्पतालमा देखिएका उपकरण, मानव स्रोत व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधान नगरे संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी दिएको छ ।
दलित मुक्ति मोर्चामा विश्वकर्मा
चितवन, २६ चैत । नेकपा माआवोदी केन्द्रनिकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा भरतपुर महानगर कमिटीको अध्यक्षमा भीमबहादुर विश्वकर्मा चयन भएका छन् ।
५१ सदस्यीय कमिटीको उपाध्यक्षमा रविलाल वि.क.,अविनाश रम्तेल र बिष्णु वि.क. रहेका छन् । त्यस्तै सचिवमा विमला वि.क., सहसचिवमा शोभा बराली र कोषध्यक्षमा दिलबहादुर वि.क. चयन भएका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई विजयी गराउन मोर्चा तयार रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ । उनले आरक्षणमा मात्रै नभई राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी नेतृत्वहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र पोलिटब्युरो सदस्य रणेन्द्र बराली, जिल्ला सहइन्चार्ज घनश्याम दाहाल, मोर्चाको तीन नम्बर प्रदेशका सहसंयोजक डाक्टर बुद्धि उपरकोटी, दलित मुक्ति मोर्चा चितवनका फ्याक्सन इन्चार्ज खेमबहादुर दमाई लगायतले मन्तव्य व्यत्त गरेका थिए ।
भिसामा समान व्यवस्था आवश्यक
चितवन, २६ चैत । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आयरल्याण्डका उच्चस्तरीय सरकारी व्यक्तिसँगको भेटका क्रममा नेपालको हितको पक्षमा प्रस्ताव राखेका छन् ।
आयरल्याण्ड भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सभामुख, संसदहरु, पूर्वसभामुख, पूर्वरक्षामन्त्रीसँगको भेटका क्रममा पाण्डेले नेपालीले आयरल्याण्डबाट बेलायत जानको लागि लाग्दै आएको भिसा व्यवस्था सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भारत र चीनका नागरिकले बिनाभिसा आयरल्याण्डबाट बेलायत जान पाउने व्यवस्था भएपनि नेपालका नागरिकले भने भिसा लगाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
विभिन्न भेटघाटका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आयरल्याण्डका सभामुख सिनओ कम हेगल, परराष्ट्रमन्त्री चार्ली पिनेगन, संसद सिन वारहेट, मौरिओ सुलिभान, पूर्वसभामुख लगायतका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेका थिए । भेटका क्रममा नेता पाण्डेले नेपाली विद्यार्थीले पाउँदै आएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने माग गरे ।
भेटका क्रममा नेपाल आयरल्याण्ड संसद मैत्री समाज गठन गरिएको छ । समाजका विभिन्न पदाधिकारीहरुसँगको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष जीवन तिमिल्सिना, महासचिव गंगाराम कँडेल, सदस्य बालकृष्ण श्रेष्ठ लगायतका व्यक्ति सहभागी थिए । उनीहरुले आयरल्याण्डबाट सगरमाथा चढ्नका लागि हिँडेका पर्वतारोहीहरुलाई शुभकामना दिएका थिए । नेता पाण्डे चैत २८ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।
देउराली बचतको आठौँ वार्षिकोत्सव
चितवन, २६ चैत । देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी आफ्नो आठौँ वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ ।
२०६६ साल चैत २५ गते सहकारी प्रशिक्षण डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको यो संस्थाले आठौँ वार्षिक उत्सव मनाएको हो । नयाँवर्ष २०७४ को भित्तेपात्रो प्रकाशन, विद्यार्थी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान, उत्कृष्ट शेयर सदस्य, उत्कृष्ट रक्तदाता सम्मान, दीप प्रज्ज्वलन लगायत कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष तेजेन्द्र खड्का प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष गुमानसिं खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा बाह्रघरे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष महेशकुमार पौडेल, सगुन साकोसका अध्यक्ष तोयानाथ चालिसे, रामेश्वर साकोसका रामप्रसाद अधिकारी, धारापानी साकोसका अध्यक्ष दयाराम कँडेल, दुर्गा भगवती मन्दिर समितिका अध्यक्ष बालचन्द्र वाग्ले, सल्लाहकारहरु सुदीप वाग्ले, प्रदीप वाग्ले लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
कानून विपरीत भरतपुर अस्पतालको टेण्डर
चितवन, २५ चैत । चितवनको भरतपुर अस्पतालको सी ब्लक भवन निर्माणको टेण्डर प्रकृया नियम मिचेर अघि बढाएको पाइएको छ ।
सुस्त गतिमा निर्माण प्रकृया अघि बढेको सी ब्लक भवन निर्माणको टेण्डर प्रकृयामा ठेकेदारहरूसँग कमिसनमा मिल्न सक्ने गरी नियम मिचेर टेण्डर गरेको तथ्य खुल्न आएको छ । अस्पतालले गत पुस ८ गते अस्पतालको सी ब्लक भवन निर्माणका लागि प्राविधिक प्रस्ताव मात्रै माग गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारले गत पुस ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक खरिद (चांैथो संसोधन) नियमावली २०७३ को दफा ३१ (ङ) को उपनियम २ मा दुई करोडभन्दा बढी रकमको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव एकैपटक माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा भनिएको छ, “प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग–अलग खाममा राखी शिलबन्दी गरी प्रत्येक खामको बाहिर कुन प्रस्ताव हो स्पष्ट रूपले उल्लेख गरी बोलपत्र आह्वानको सूचना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा खुलाउनु पर्नेछ ।”
यसरी माग गरिएको प्राविधिक प्रस्तावमा १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीको अध्यक्षतामा रहेको मूल्याङ्कन समितिले ६ वटा कम्पनीलाई मात्रै छनौट गरेको छ ।
मूल्याङ्कन समितिमा अस्पतालका सुपरिटेण्डेण्ट डा. मरासिनी, लेखा अधिकृत हरिहर शर्मा तिवारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर चक्र थापा रहेका छन् ।
छनौट हुने कम्पनीहरू रसुवा कन्स्ट्रक्सन्स प्रालि, प्रेरा निर्माण सेवा प्रालि, महादेव खिम्ती लुम्बिनी मुन्ना एण्ड आचार्य जे.भी., शर्मा एण्ड कम्पनी प्रालि, आशिष श्यामसुन्दर प्रतिष्ठा जे.भी. र स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालि रहेका छन् ।
अस्पताल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, छ कम्पनीमध्ये प्रेरा निर्माण सेवा प्रालिलाई नै भरतपुर अस्पतालको सी ब्लक निर्माणको ठेक्का दिइनेछ । यस कम्पनीले यसअघि अस्पतालको ए ब्लक भवनको दोस्रो र तेस्रो तल्ला निर्माण गरेको थियो ।
कमिसनका लागि सेटिङ
अस्पतालले सी ब्लक निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद (चौथो संसोधन) नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मिचेको प्रष्ट देखिन्छ । ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको व्यवस्थालाई लत्याउँदै ८ गतेको गोरखापत्रमा पुरानै नियमलाई मानेर टेण्डर आह्वान गरिनु छानिएका प्रस्तावकहरूसँग मिलेर कमिसन खानका लागि बाटो छोटो बनाउने काम भएको अस्पतालमा काम गर्ने एक जना वरिष्ठ कर्मचारीले बताए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ईटेण्डर गर्ने वेबसाइटमा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राविधिक र आर्थिक दुबै प्रस्ताव एकैपटक सिष्टममा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एउटा मात्रै प्रस्ताव इन्ट्री नै हुँदैन ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका आईटी कल्सल्ट्यान्ट सिकन्दर झाले भने, “उहाँहरूले सिष्टमले नै फेल गराउने टेण्डर कसरी गर्नुभयो भन्ने छानबिनको बिषय बन्न सक्छ ।” अस्पतालले गरेको विज्ञापनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको डब्लुडब्लुडब्लु डट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपीमा प्रस्ताव पठाउन भनेपनि सबै प्राविधिक प्रस्तावहरू ईटेण्डरको माध्यमबाट नभई शिलबन्दी खामका माध्यमबाट आएको पाइएको छ ।
अस्पतालको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत यस बारेमा सूचना राखिएको छैन । ‘सरकारको नियम वा कानुनलाई थाहा छैन या जान्दैनौं भन्न पाइँदैन’ कार्यालयका आईटी कल्सल्ट्यान्ट झाले भने, “प्राविधिक प्रस्ताव हेरेर आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने प्रकृया भएपनि बोलपत्र आह्वान गर्दा भने एउटै सूचनामार्फत एकैपटक माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
अस्पतालको खरिद इकाई समितिका एक सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘करोडौंको भवनमा पाँच प्रतिशतमात्रै कमिसन दिएपनि लाखौं रकम आउँछ । त्यही भएर नियम मिचेरै काम गरिएको छ ।’ भरतपुरमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले समेत यस बारेमा खासै चासो राखेको छैन ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर चक्र थापा प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिका सदस्यमध्ये एक हुन् । अस्पतालका मेसु डा. मरासिनी आफूहरुले नियम, कानुन र नियमावलीमै टेकेर टेण्डर गरेको दाबी गर्छन् ।
भरतपुर अस्पतालले नियम मिचेर टेण्डर आह्वान गरेपछि ठेकेदार कुमार आर्चाय लगायतले उजुरी नै दर्ता गराएका छन् । तर त्यसमाथि कुनै पनि सुनुवाई भएको छैन ।
आर्थिक प्रस्ताव हाल्न पाउने अधिकार भएका ६ कम्पनीसँग मिलेर केही प्रतिशत कमिसन लिने सम्भावनालाई यसले बलियो बनाएको गुनासो ठेकेदार आर्चायले गरे ।
“ठेक्का र टेण्डरमा मेरो कुनै दाबी छैन” ठेकेदार आचार्यले भने, “तर एउटा सरकारी कार्यालयले नियमावली मिचेर गरेको टेण्डरप्रति नियमन गर्ने सरकारी निकायले के हेरेर बसेका छन् ?”
रकम फ्रिज हुने डर
अस्पतालका तत्कालिन अध्यक्ष विजय सुवेदीले तीब्र गतिमा प्रकृया अघि बढाएको सी ब्लक भवनको निर्माणको काम पछिल्लो समयमा निकै सुस्त भएको छ । यसले गर्दा स्वीकृत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ ।
अस्पतालले प्राविधिक प्रस्तावबाट छानिएका छ वटा कम्पनीहरूसँग छुट्टै आर्थिक प्रस्ताव चैत ९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी माग गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको ३१ औं दिनमा टेण्डर खोल्दा बैशाख ८ गते हुन्छ ।
नियमसंगत ढंगबाट काम अघि नबढेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘मैले नै पिक्यू गरेर टेण्डर गर्न सक्थेँ, तर सरकारको नियमावली परिवर्तन हुन लागेको र आर्थिक एवम् प्राविधिक प्रस्ताव एकैपटक माग गर्दा कार्टेलिङ र कमिसनको सम्भावना कम हुने भएकोले रोकेको हुँ ।’
भवनको टेण्डर नहँुदै विश्वासमा परेर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गत असोज ६ गते सी ब्लकको शिलान्यास गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज ४ गते अस्पतालको सी ब्लक भवन निर्माणको लागि २८ करोड ८२ लाख १५ हजार रुपैयाँको लागत स्वीकृत गरेको थियो ।
सी ब्लक भवनमा सरकारको ८० प्रतिशत र अस्पतालको २० प्रतिशत लगानी हुनेछ । सी ब्लक भवनको ड्रइङ्ग डिजाइन एनट आर्किटेक्चर एण्ड आर्किटेक्स कम्पनीले तयार गरेको हो । अस्पतालका मेसु डा. मरासिनी र अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले काम कहाँबाट शुरु गर्ने भनेर मेलो मेसो समात्न सकेका छैनन् ।
भरतपुर अस्पतालमा शिलान्यासमाथि शिलान्यास
चितवन, २६ चैत । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने झैँ भरतपुर अस्पतालले शुक्रबार वार्षिकोत्सवको अवसरमा शिलान्यास भइसकेको धारा निर्माण हुने ठाउँमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङबाट पुनः शिलान्यास गराएको छ ।
श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपाल, श्री सत्य साई क्षेत्रीय समिति ४ द्वारा भरतपुर अस्पतालमा निमार्ण गर्न लागिएको शुद्ध पिउने पानीको धारा निर्माणस्थलमा आयोजक संस्थाको युवा विभाग चितवनका संयोजक मनिष सापकोटाले धारा निर्माणको शिलान्यास गरेको एक घण्टापछि अस्पतालले राज्यमन्त्री गुरुङलाई सोही ठाउँमा पुनः शिलान्यास गर्न लगाएको हो ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रुद्र मरासिनी र अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीको कमजोरीका कारण यस्तो भएको सहभागीहरुले बताएका छन् । राज्यमन्त्री गुरुङ भरतपुर अस्पतालको ५४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुन चितवन आएको थिए । पहिले नै शिलान्यास भएको इँटामाथि राज्यमन्त्री गुरुङले एक कर्नी मसला (सिमेन्ट र बालुवाको मिश्रण) राखेका थिए ।
‘एकपटक शिलान्यास कार्य पूरा भइसकेको स्थानमा भरतपुर अस्पतालले राज्यमन्त्रीलाई झुक्याएर पुनः शिलान्यास गर्न लगाउनु निकै लज्जास्पद कुरा हो’ धारा निर्माणको शिलान्यास गरी फर्केका मनिष सापकोटाले भने, ‘एकै स्थानमा दुई जनाले शिलान्यास गर्नु, राज्यमन्त्री तहको मान्छेलाई झुक्याइनु दुःखद कुरा हो ।’
भरतपुर अस्पताल परिसरमा शुद्ध पिउने पानीको उचित व्यवस्था नभएकाले आठ वटा धारासहितको चिसो खानेपानीको व्यवस्थाका लागि आफूहरुले करिब १५ लाख लगानी गरी फुलबारीसहितको पानीको धारा निर्माण गर्न लागिएको सापकोटाले बताए । खानेपानी निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि अस्पतालमा आउने बिरामी र सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेछन् ।
अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा चितवनका राजनैतिक दलका नेताहरुले अस्पतालमा राजनैतिक भर्ना गर्न नहुने बताएका छन् । अस्पतालमा नयाँ अध्यक्षका रुपमा राजकुमार राजभण्डारी आइसकेपछि उनले पुराना कर्मचारीलाई निकाल्ने र आफ्नो पार्टीका नयाँ मान्छे राख्ने खेल सुरु गरिसकेका छन् । राजभण्डारी नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता भएकै कारण भरतपुर अस्पतालको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेका हुन् ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा केही सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई निम्ता नगरिनुले पनि वर्तमान अध्यक्ष राजभण्डारीले पूर्वाग्रही ढंगले काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । भरतपुर अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत केही पत्रकारलाई निम्ता नै गरिएको थिएन ।
व्यवस्थित शहरीकरणको योजना कार्यान्वयन आवश्यक
नारायणगढ, २५ चैत । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले व्यवस्थित शहरीकरणको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने भरतपुर महानगरपालिका भएको कुनै औचित्य नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार भरतपुरमा समृद्ध चितवन अभियानले गरेको व्यवस्थित समृद्ध महानगर हाम्रो अभियान विषयक कार्यशाला गोष्ठी तथा प्रतिज्ञा कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले योजनाका साथ काम गर्न सकिएन भने ठाउँको नाम फेर्दैमा त्यहाँको विकास नहुने बताए ।
‘अहिले हामीले सात सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम गरेका छौँ । यी तहबाट विकास निमार्णका काम अगाडि बढ्नेछ’ उनले भने, ‘तर आमनागरिक विकासमा नलाग्ने हो भने ठाउँ परिर्वतन गर्दैमा केही हुँदैन ।’
कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सम्भावना रहेको भन्दै उनले महानगरपालिकामा कुनै एक विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । महानगर तथा नगरपालिकाको उद्देश्य कर बढी उठाउने र त्यहाँको विकासको लागि जनतालाई नै अधिकार दिने रहेको उनले बताए ।
‘अबको नगरपालिका अझ बढी कर उठाउने, अलि बढी अधिकार प्रत्याभूति दिलाउने, माध्यमिक शिक्षासम्मको नीति आफै बनाउन सकिने हुन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य आफै चलाउन सक्छ’ उनले भने, ‘यहाँको प्राकृतिक विकासमा सरकारले लगाउने कर आफै लगाउन सक्छ । त्यसकारण हामीले प्राप्त गरेको यो अधिकार राम्रोसंग सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने देशको विकासले फड्को मार्नेछ ।’
महानगरपालिकाले अन्य नगरहरुसंग पनि जोडिएर काम गर्न सक्ने उनले बताए ।
सचिव अधिकारीले तत्काल तोकेका स्थानीय तहको विकासमा लगानी गर्नका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाउन लागेको बताएका छन् ।
‘अब सात सय ४४ केन्द्र एउटा विकासको आयामलाई गति दिनका लागि असाध्यै उपयुक्त केन्द्रको रुपमा विकास भएका छन् । त्यसैले हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्ने कुरा भनेको यी केन्द्रलाई चलायमान बनाउने हो’ उनले भने, ‘यसको विकासमा सरकारले लगानी गर्दैछ । हामी सबै गुरुयोजनाका लागि लगानी गर्दैछौँ ।’
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डाक्टर सूर्यराज आचार्यले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्थान जोड्ने केन्द्र भएकाले भरतपुरको विकासको सपना उज्ज्वल रहेको बताए । उनले नदी तटबन्धन, नदी किनारमा सडक, पार्क, आधुनिक शहरीकरण, पूर्वपश्चिम रेलमार्गका स्टेशन केन्द्रित शहरी उपकेन्द्रको योजनासहित महानगरपालिका अगाडि बढ्नु पर्ने बेला आएको बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकालाई काठमाडौँजस्तो अव्यवस्थित सहर नबनाई बेलैमा व्यवस्थित योजनाका साथ समृद्ध महानगरपालिका बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भरतपुरलाई व्यवस्थित तवरबाट विकास गर्ने हो भने औद्योगिक राजधानी बनाउनको लागि काठमाडौँ जानै नपर्ने बताए ।
उनले स्मार्ट सिटी, शहरी डिजाईन र भवन निर्माण संहिता, चक्रपथ, मूल सडक र अन्य सडकहरुको व्यवस्थित रुपमा विकास गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले काठमाडौँ क्रंक्रिटको शहर बनेको छ । त्यहाँ आगलागी हुँदा दमकल छिर्न नसक्ने गल्ली छन्’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा बेलैमा भरतपुर महानगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्छ ।’
चितवनको समग्र विकासको लागि यहाँ २०६७ सालमा गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । बृहद चितवन गुरुयोजनाका संयोजक विजय सुवेदीले चितवनको विकासका लागि पश्चिममा दाउन्ने र पूर्वमा हेटौँडासम्मको भूभाग चाहिने बताएका छन् । चितवनको दीर्घकालीन विकासको रणनीति हेरेर यहाँको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
समृद्ध चितवन अभियानका अध्यक्ष तारा पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा सांसद काशीनाथ अधिकारी, पूर्वमन्त्री केशवलाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव सञ्जीव न्यौपाने, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतम, नेपाल चिकित्सक मञ्च चितवनका सचिव डाक्टर भोजराज अधिकारी लगायतले बोलेका थिए ।
स्थायी गर्नुपर्ने आंशिक प्राध्यापकको माग
नारायणगढ, २६ चैत । आंशिक प्राध्यापकलाई छिटो प्रकृया गरेर करारमा लैजानको लागि वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा अध्यापन गर्दै आएका प्राध्यापकले माग राखेका छन् ।
आंशिक प्राध्यापक समिति वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्नो समस्याका बारेमा क्याम्पस प्रशासनले छिटो सनुवाई गर्नु पर्ने बताए । त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुमा प्रवेश गर्ने बिन्दु नै आंशिकबाट भएकाले स्थायी प्रकृयामा जानको लागि समस्या हुने गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गोविन्द सापकोटाले आफू पनि आंशिकबाटै सेवा प्रवेश गरेकाले यो नै समयमा करार हुने भन्ने निश्चित नभएको बताए । क्याम्पसको संस्थापक विद्यार्थी भएको र २०४७ सालबाट आंशिक प्राध्यापकबाट प्रवेश गरेर अहिले क्याम्पस प्रमुख भएको उनले बताए । केही वर्ष यस पदमा रहेर काम गरेपछि त्रिविले दिएको कोटाको आधारमा करार हुँदै जाने उनको भनाई छ ।
क्याम्पसका सहायक प्रमुख दयानिधि घिमिरेले त्रिविको यो प्रकृयाले गर्दा आंशिक प्राध्यापकहरु धेरै समस्यामा पर्ने गरेको बताए । वर्षौं अध्यापन गर्नु पर्ने तर करार स्थायी हुने टुंगो नहुने अवस्थाले पीडा दिएको उनले बताए । वर्षौं अध्यापन गराएकालाई क्याम्पस प्रशासनले करारमा लैजाने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ वीरेन्द्र क्याम्पसका अध्यक्ष दयाराम पौडेलले त्रिविमा प्रवेश गर्ने प्रकृयामा नै कमजोरी भएकाले आंशिक प्राध्यापकहरुले समस्या पाइराखेको बताए । आंशिक रुपमा अध्यापन गर्नु पर्ने र वर्षौं कुरेर करारमा जानु पर्दाको पीडा धेरै भएको आफूले महसुस गरेको उनले बताए ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन वीरेन्द्र क्याम्पसका अध्यक्ष सुशील दाहालले धेरै समय पढाएर पनि आंशिक भनिने व्यवस्था नै गलत भएका बताए । ‘धेरै समय पढाएर पनि करारमा नियुक्ति नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ’ उनले भने, ‘आंशिक प्राध्यापकलाई पुस्तकायलमा पनि भेदभाव गरिएको छ । प्राध्यापकले पुस्तक माग्दा धरौटी राखेर दिने व्यवस्था नै गलत छ ।’
प्राध्यापक मदन फूयालले क्याम्पस प्रमुखले पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार नदेखाउन अनुरोध गरे । ‘प्राध्यापकलाई करारमा राख्दा वा अन्य व्यवहारमा आफूनिकट पार्टीका प्राध्यापकलाई र अन्य पार्टीनिकट प्राध्यापकलाई फरक ढंगको व्यवहार देखिन आएको गुनासो छ’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवहार हामीलाई मान्य छैन ।’
प्राध्यापक महेश काफ्लेले एक वर्ष प्राध्यापन गरेर आंशिक प्राध्यापकले ८ देखि १० हजार रुपैयाँ पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने बताए । उनले १० वर्ष अगाडि र अहिले पाउने पारिश्रमिक एउटै भएकाले समय अनुसारको परिमार्जन गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
ज्यादै न्यून रुपैया दिएर प्राध्यापन गर्न लगाउने गुणस्तरीय पढाइको कुरा गर्ने यो मिल्न नसक्ने आंशिक प्राध्याकपहरुले बताएका छन् । आंशिक प्राध्यापकहरुको मागको विषयमा सुनुवाई नगरे क्याम्पस प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न तयार भएको बताएका छन् ।
चितवनमा केराखेती फस्टाउँदै
नारायणगढ, २५ चैत । चितवनमा यस वर्ष थप दुई सय बिघामा केराखेती बिस्तार भएको छ ।
चितवन केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार अघिल्लो वर्ष दुई हजार ४ सय बिघामा केराखेती गरिएको थियो । यस वर्ष क्षेत्रफल बिस्तार भई दुई हजार ६ सय २० बिघा पुगेको छ । जिल्लामा हाल ६ सय १५ जना केरा खेती गर्ने किसान छन् । चितवनमा गत वर्ष ४६ हजार मेट्रिक टन केरा उत्पादन भई एक अर्बको केरा बिक्री भएको थियो ।
रत्ननगर, पदमपुर, पिठुवा, जुटपानी, चैनपुर, जगतपुर, मेघौली, ठिमुरा केराखेतीको पकेट क्षेत्र हुन् । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका कारण केराखेती ह्वात्तै बढेको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । कृषि अनुदान कर्जा सहज भएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा केरासमेत समावेश गरिएमा केराखेती अझै फस्टाउने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
Copyright © 2018 Paradarshi. All Rights Reserved. Designed by AVASS.